စစ်ကိုင်းက ရပ်တော်မူ မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ကြိုးတစ်ချောင်းတည်း နဲ့ တက်ပြီး စွန့်စွန့်စားစားရွှေချ ပူဇော်နေသူများ – Let Pan Daily
မုံရွာမြို့က ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး ရပ်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကြီးကို စွန့်စွန့်စားစား နဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲရွှေချပူဇော်နေတဲ့ ပုံရိပ်များဖြစ်ပါတယ်…ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ အမြင့်ကြီးမှာ ရွှေချပြီး ကုသိုလ်ယူနေကြတဲ့ လေးစားဖွယ်လူတွေပါ…လေးကျွန်းစကြာ ရပ်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကြီးကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်…
ဉာဏ်တော်အမြင့်ပေ (၄၂၄)ပေ အမြင့်ဆောင် ပြီး၊ အထပ်ပေါင်း (၃၃)ထပ်ပါရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်….စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမှာ တည်ထားကိုးကွယ်ထားတာပါ…ခုအခါမှာတော့ ရပ်တော်မူဘုရားကြီးကိုရောင်တော်ဖွင့် ပြန်လည် ရွှေချနေပါတယ်….
ပေပေါင်းရာချီမြင့်တဲ့ ရပ်တော်မူဘုရားကြီးကို ခက်ခက်ခဲခဲ နဲ့ ရွှေချနေတဲ့ဆေးဆရာတွေရဲ့အလှူကို ပရိသတ်ကြီးတို့ တွေ့နိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်ကြိုးတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရစ်ချည်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ရွှေချကုသိုလ်ယူနေတာပါ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အခုလို ရွှေချနေတဲ့ ဆေးဆရာတို့ကို ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်.သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင် ကြပါစေနော်…
Source Thi Ha Monywa
စဈကိုငျးက ရပျတျောမူ မွတျစှာဘုရားကွီးကို ကွိုးတဈခြောငျးတညျး နဲ့ တကျပွီး စှနျ့စှနျ့စားစားရှခြေ ပူဇျောနသေူမြား
မုံရှာမွို့က ကမ်ဘာ့ ဒုတိယအကွီးဆုံး ရပျတျောမူမွတျစှာဘုရားကွီးကို စှနျ့စှနျ့စားစား နဲ့ ခကျခကျခဲခဲရှခေပြူဇျောနတေဲ့ ပုံရိပျမြားဖွဈပါတယျ…ကွိုးတဈခြောငျးတညျးနဲ့ အမွငျ့ကွီးမှာ ရှခေပြွီး ကုသိုလျယူနကွေတဲ့ လေးစားဖှယျလူတှပေါ…လေးကြှနျးစကွာ ရပျတျောမူမွတျစှာဘုရားကွီးကို ၁၉၉၅ ခုနှဈတှငျ စတငျတညျထား ကိုးကှယျခဲ့ပါတယျ…
ဉာဏျတျောအမွငျ့ပေ (၄၂၄)ပေ အမွငျ့ဆောငျ ပွီး၊ အထပျပေါငျး (၃၃)ထပျပါရှိသညျ။ ကမ်ဘာ့ဒုတိယအကွီးဆုံးဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောကွီးဖွဈပါတယျ….စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး မုံရှာမှာ တညျထားကိုးကှယျထားတာပါ…ခုအခါမှာတော့ ရပျတျောမူဘုရားကွီးကိုရောငျတျောဖှငျ့ ပွနျလညျ ရှခေနြပေါတယျ….
ပပေေါငျးရာခြီမွငျ့တဲ့ ရပျတျောမူဘုရားကွီးကို ခကျခကျခဲခဲ နဲ့ ရှခေနြတေဲ့ဆေးဆရာတှရေဲ့အလှူကို ပရိသတျကွီးတို့ တှနေို့ငျအောငျ ပွနျလညျမြှဝပေါတယျကွိုးတှနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဈခညျြပွီး ခကျခကျခဲခဲ ရှခေကြုသိုလျယူနတောပါ…ပရိသတျကွီးတို့လညျး အခုလို ရှခေနြတေဲ့ ဆေးဆရာတို့ကို ဂုဏျပွုပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော.သာဓု ချေါဆိုနိုငျ ကွပါစနေျော…